UMnu Viloshin Govender kanye noDkt Claudia Loggia babonakala nephepha lokukhangisa ucwaningo lwabo eNkundleni yezeNhlalo yoMphakathi yezoMhlaba.Click here for English version
Othisha abavela eSikoleni SeziFundokuhlelwa Komumo Wezakhiwo Nentuthuko u-Dkt Claudia Loggia kanye no Mnu Viloshin Govender basanda kwethula inkulumo yesikhangiso kanye nephepha kusihloko esithi Co-producing spatial maps for risk management and disaster response in informal settlements in South Africa, Enkundleni yezeNhlalo yoMphakathi yezoMhlaba ebibanjelwe e-Fukuoka, e-Japan.
Inkundla yezamazwe ngamazwe ikhuthaze izingxoxo ezifundweni ezahlukene kanye nokushintshana ngamasu nangemiphumela yocwaningo kusihloko: Security and Equality for Sustainable Futures. Othisha bobabili, abayingxenye yethimba le-ISULabantu, bathule inkulumo yomsebenzi wabo emhlanganweni obuhlose ukubandakanya imiphakathi ukuze ikwazi ukubhekana nezinhlekelele.
Isifundo siphakamisa indlelakwenza yocwaningo olungxube lebalazwe yemijondolo, okuhlanganisa izithombe nge-drone nezebalazwe. ULoggia kanye no-Govender bebelokhu besebenza ukuze bathuthukise le ndlelakwenza yocwaningo kusukela ngonyaka wezi-2017 kanti isihlolwe kucwaningonto oluthathu eThekwini.
‘Inhloso enkulu yalesi sifundo ukuthola kanye nokubonisa ubungcuphe ezingozini zemvelo emijondolo yaseNingizimu Afrika. Le ndlela entsha ihlose ukuthuthukisa ukumelana nesimo komphakathi kanye nokusungula ngokubambisana amasu asebenzayo okulawula izinhlekelele emijondolo,’ kusho uLoggia.
Ucwaningo lwabo luphakamisa ukuthi ukuba sengcupheni kanye nokumelana nesimo kungenzeka kokubili emijondolo kanti futhi kubalulekile ukuqonda lokhu uma uzosebenzisana nabahlali bendawo.
Inkulumo igqugquzele ingxoxo enamandla ngokubaluleka kokufaka uhlelo oluhlanganisa abantu ukuze kuthuthukiswe imiphakathi yendawo ehlaselwe izinhlekelele zemvelo. Bonke ababambe iqhaza bavumelene ngokuthi ukumelana nesimo kungaqala ngezexwayiso kanti uhulumeni wendawo kumele weseke futhi uthuthukise imiphakathi ukuze bakwazi ukubhekana nezinhlekelele.
Ukuze uthole olunye ulwazi ngephrojekthi ye-ISULabantu, sicela uvakashele www.isulabantu.org.
Amagama: uMelissa Mungroo